TOOS: Hadal jeedinta RW Rooble ee Xildhibaannada Golaha Shacabka - Awdinle Online
TOOS: Hadal jeedinta RW Rooble ee Xildhibaannada Golaha Shacabka
Kulanka Xildhibaannada Golaha Shacbaka ayaa ka furmay Xarunta Villa Hargeysa ee Magaalada muqdisho, iyada oouu Xildhibaannada hortegay Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen rooble.
164 Xildhibaan Xildhibaan ayaa kulanka xaadiray, waxaana Maanta kulanka uu yahay Hadal Jeedinta R/Wasaaraha & Warbixin ku saabsan Waxqabadkii 100ka Maalmood ee Xukuumadiisa.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal oo kulanka furay ayaa Xildhibaannada ku wargeliyay in aan la ogoleyn buuq farabadan iyo in Firimi la yeeriyo maaadaama dhowr jeer Madaxweyne Farmaajo oo khudbad u jeedinaya Xildhibaannada firimbi lagu yeeriyay.
Guddoomiye Mursal ayaa Ra’iisul Wasaaraha ugu baaqay in khudbadiisa uu kusoo koobo warbixinta la xiriirta waxqabadka xukuumadiisa ee Isniintii loo qeybiyay Golaha Shacabka, isla markaana uusan ka hadli war la xiriira doorashooyinka Soomaaliya.
Goordhow ayay bilaabatay khudbadda Ra’iisul Wasaaraha oo uu kaga hadlayo waxqabadka 100kii Maalmood oo ay xukuumadiisa jirtay iyo waxyaabaha u qorsheysan.
Halkan Ka Daawo Khudbadda Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya.
Previous articleMareykanka oo ka walaacsan muranka doorashooyinka Soomaaliya
Next articleGuddoomiyaha Aqalka sare oo shuruud ku xeray in uu aqbalo wixii kasoo baxa Shirkii uu ku baaqay Farmaajo